Kolonovidny apricot "Prince March", ndụmọdụ kachasị mma na-eto eto maka novice gardeners - Aprịkọt iche iche - 2020
Ihe ị chọrọ ịma banyere ịkụ iche
Olee otú ịhọrọ ebe maka akuku apricot "Prince March"
Idebe nkwadebe olulu mmiri
Atụmatụ nke kere iche "Prince March"
Atụmatụ maka iche iche
Esi mmiri apricot
Atụmatụ nri colloid aprịkọt, karịa na otú e si ifatilaiza osisi
Nuances dị mkpa mgbe kwachaa
Mmeputakwa nke colony ekara apricot iche "Prince March"
"Prince March" - atụmatụ nke iche iche
Nkọwa nke apricot colonic
Aprịkọt "Ọchịchị March" - osisi bara uru nke nwere osisi mara mma ma na-eje ozi dị ka mgbakwunye pụrụ iche na agbanye ma ọ bụ ubi. "Prince Mart" - osisi dị ala, na-eru nanị mita 2 n'ịdị elu. Osimiri na-eme na March na April.
Mkpụrụ osisi chara n'onwe na mbubreyo oge okpomọkụ, nwere etiti agba odo na obere "ihie". Mkpụrụ nke mkpụrụ osisi na-acha mkpụrụ osisi sitere na 30 ruo 60 g. Akwụkwọ nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche, ma na-enwe mkpịsị aka. Osisi ahụ nwere okporo osisi siri ike, nke obere akụkụ na-agbaji.
A na-akụkarị "Prince" n'oge oyi ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi. Na mpaghara nwere nwayọọ nwayọọ, na-akụ n'oge mgbụsị akwụkwọ oge na-anabata. A ga-atụle isi ihe ndị ọzọ dị mkpa nke ịgha mkpụrụ dị iche iche "Prince March" ga-emesị tụlee.
Ịmepụta ihe ịga nke ọma nke mkpụrụ osisi na-eto eto n'ubi gị kwesịrị ịmalite site na nhọrọ ziri ezi nke ịkụ ihe. Ị ghaghị ijide n'aka na ị mepụtara ntọala dị mma maka ọdịnihu nke osisi ahụ.
Apricots oge ntoju na mmalite oge opupu ihe ubi. Na ebe ọ bụ na mmiri frosts bụ nsogbu maka osisi ahụ, "Prince" adịghị atụ aro ala n'elu ala. Ntu oyi nwere ike igbu okooko osisi na osisi ma na-anapụ gị ihe ubi.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-akụ apricot na ọdịda, oyi nwere ike ịbụ ule siri ike maka osisi ahụ. Obere okpomọkụ nwere ike imebi osisi.
Ghaa osisi na nseta 15 cm site na mgbidi ma obu nsu. Zere ebe ebe eggplants, tomato, ose, poteto, raspberries na strawberries nọ na-eto eto. Omenala ndị a niile nwere ike bụrụ ndị na-ekesa ihe na-emenụ.
Aprịkọt na-achọkwa ọtụtụ okpomọkụ n'oge oge okpomọkụ. Mgbe kere apricots họrọ ebe anwụ na-acha.
Ị ma? Daalụ okpueze pụrụ iche "Prince March "na-ewe e nwere ọtụtụ obere ohere na saịtị karịa ụdị apricot ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, "Onyeisi - ụdị onwe-pollinating dịgasị iche iche, nke pụtara na maka nnukwu ihe ubi naanị otu osisi dị gị mkpa.
Osimiri na-asọpụta ga-abụ nke dị ukwuu nke na mgbọrọgwụ kwesịrị ekwesị na ya. Osimiri kwesịrị ịbụ ọ bụghị naanị miri emi, kama ọ ga-abụkwa nke zuru ezu ka usoro mgbọrọgwụ wee nwee ike ịdakwasị ụdị mpempe akwụkwọ. Na-anakọta n'elu ala dị iche iche.
Mgbe ị na-akwadebe olulu ahụ, a ghaghị ilekọta iji chebe mgbọrọgwụ site na ihichapụ. Sook rhizome maka awa 1 ma ọ bụ 2 n'ime bat ma ọ bụ nnukwu tank mmiri. A na-atụ aro ka mmiri na-atụgharị miri emi na ngwọta na nri. Ngwunye dị otú a dị irè ga-enyere osisi ahụ aka ngwa ngwa ma na-eto eto n'ike.
Ọ dị mkpa! Tupu ịkọ apricot, ọ bụ naanị otu ụdị uwe elu ka a na-etinye n'ime ala: compost ma ọ bụ humus, osisi ash ma ọ bụ ịnweta nri ịnweta.
Ọrụ na-arụ ọrụ na usoro ndị a:
Nke mbụ, dozie ala. Maka ezi uto nke apricot chọrọ ala ala ala, ọgaranya na phosphate na potash nri. Leleekwa acidity nke ala. Apricots na-ahọrọ ala dịtụ ala (pH na gburugburu 6.0-8,0).
Osisi osisi dị anya nke ihe dịka mita 7 site na ibe ya.
Tinye osisi na akuku onu, jiri nlezianya meghee mgbọrọgwụ.
Na-ekpuchi olulu na ala, na-ezere ịmepụta akpa ego. Gbalịa jiri nlezianya gbanye ala gburugburu mgbọrọgwụ.
Gburugburu olulu mmiri (n'elu ala), mepụta ụdị bezel si n'ala. Nke a ga - ekwe ka mmiri ahụ guzoro ma gbanye.
Mgbe 3-Afọ anọ site na mgbe ịgha mkpụrụ osisi apricot malitere ịmị mkpụrụ. Kpachara anya mgbe ị na-anakọta mkpụrụ osisi ahụ, ka ị ghara imebi akpụkpọ ahụ na ọdịdị dị nro.
Ilekọta ụdị apricot "Prince March" abụghị oge na-ewe. Osisi ahụ chọrọ ịṅụ mmiri mgbe nile, nri kwesiri ekwesị, ịdị uchu idochasị oke na nchịkwa.
Otutu nsogbu na apricot "Prince March" nwere ike jikọta ya na usoro na-ezighi ezi. Ịgbara osisi gị na-emekarị ihe ize ndụ nke ime ka ọ bụrụ onye na-agbanye mgbọrọgwụ. Ka ọ dịgodị, mmiri na-ezighi ezi nwere ike ime ka mkpụrụ osisi ghara ịcha.
Na-agụkwa gbasara ịkụ mkpụrụ nke apricot dị iche iche: Black Kuban, Black velvet, Black Prince.
Kpebie oke mmiri n'ime ala gị. A na-achọ ịgbara mgbe ala 15 cm ala ala dị ntakịrị mmiri. Iji spatula ma ọ bụ spade, igwu obere onu na nso osisi. Debe onye na-achị achị n'ime oghere iji chọpụta n 'ala ọ dị ala.
Ọ bụrụ na ala dị mmiri na ọkwa 15 cm si n'elu ma ọ bụ n'okpuru, mgbe ahụ ọ bụ oge iji mee ka osisi ahụ dị mmiri. Ọ na-abụkarị nke a mere otu ugboro na 10-14 ụbọchị. Ihe ndị dị ka mmiri ozuzo, oké ọkọchị na ọnọdụ ihu igwe ndị ọzọ nwere ike imetụta eserese a. Ọ bụrụ na ịchọọ igwu ala, ịnwere ike iji mita mmiri.
"Onye isi" ahụ chọrọ mmiri na-agbanwe agbanwe oge niile. Nri siri ike otu ugboro n'izu na-enyere osisi ahụ aka ịlanahụ oké ọkọchị. Maka ala aja, nke a bụ ihe dịka lita 30. Ọ bụrụ na ala bụ ụrọ na isi, mmiri ga-adị mkpa. Na oyi na mmiri, ị nwere ike ịṅụ mmiri nanị atọ ma ọ bụ ugboro anọ n'oge ọ bụla.
Fatịlaịza dị mkpa na nlekọta nke Prince nke March ọtụtụ. Osisi apricot nke dịgasị iche iche chọrọ oke nitrogen, potassium na phosphorus. A na-enyekarị ha site na ala ndị a bara uru site na ala. Tinye obere fatịlaịza ugboro atọ n'oge uto. Fatịlaịza azụmahịa na-adaba adaba dị ka uwe elu.
Ọ dị mkpa! Ọ dị ezigbo mkpa ebe nchekwa nke mkpụrụ osisi ahụ dị n'elu ala.
Apricot nlekọta na-agụnye thinning nke Ome. Ọ ka mma ịkpụ osisi ahụ na njedebe nke oge oyi ma ọ bụ na mmalite oge opupu ihe ubi, mgbe okooko osisi ọhụrụ malitere imeghe. Mgbe a gbasasịrị osisi ahụ, osisi ahụ ga-adị mma ma wetakwu mkpụrụ.
Lee ndị dị mkpa kwachaa ihe Freshly kụrụ aprịkọt "Prince March":
wepu ihe niile mebiri emebi ma ọ bụ agbaji;
wepu alaka nile di n'ime 45 cm si n'ala;
belata ogwe isi ka ọ dị 90 cm;
wepu ome ma choro (a na-ewere alaka dị iche iche karịa ugboro ugboro karịa 15 cm);
belata akụkụ ndị ọzọ fọdụrụ n'akụkụ 5-10 cm n'ogologo.
N'afọ ndị sochirinụ, osisi siri ike nke nwere usoro siri ike ga-adịrị mfe prun.
Ndị ọzọ na-ewu ewu bụ osisi na-amị osisi apple, plum na pọmnta.
A na - agbasa usoro dị iche iche "Prince March" site na ụzọ izugbe abụọ: mkpụrụ na grafting.
Mkpụrụ. A na-asacha mkpụrụ na kụrụ ozugbo. Mgbe ụfọdụ, a na-echekwa mkpụrụ osisi na ájá mmiri n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe ahụ, a kụrụ ha na mmalite October. Osisi mkpuru osisi na ala na-etinye aka na-eme ka nri di na nri na akuku.
A na-awụnye ajị anụ n'osisi ahụ, a na-awụsa ya na mmiri ma na-akụ mkpụrụ na omimi nke ihe dị ka cm 7. Mgbe ahụ, a na-agbazi akwa ahụ na humus, sawdust ma ọ bụ peat. N'ime oge okpomọkụ, mkpụrụ osisi ahụ na-eto na 1 m. N'oge oyi ọzọ, a na-ebugharị mkpụrụ osisi apricot na-adịgide adịgide.
Inoculation N'afọ mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke uto, a na-ejikarị apricot egbutu ya. A na-akwado ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi n'April ma ọ bụ May. Nhọrọ ọzọ - ịgba ọgwụ mgbochi mgbe ọ tozuru okè. A na-arụ ọrụ a "n'azụ ogbugbo" nke onye ọ bụla skeletal Ome. Nke a ga-agba ọsọ oge oge.
N'ikpeazụ, tụlee uru nke aprịkọt "Onyeisi nke March", nakwa nkọwa nke ụfọdụ njirimara dị iche iche.
"Onyeisi" bụ otu n'ime ụdị kachasị mma. Ndị na-akọ ubi na-ekwu okwu ọma banyere oge a dịgasị iche. N'oge mgbụsị akwụkwọ site na osisi ọ bụla na-aga n'ubi bara ụba.
Akwukwo apricot a nwere ike iguzogide oria, pests na obere okpomọkụ (rue -30 Celsius C). Ihe ọzọ dị mkpa nke ụdị dịgasị iche iche bụ okooko osisi mara mma. Na-adịghị ebe iche weere apical nwa osisi. Mgbe ntu oyi ma ọ bụ ọnwụ nke nwa osisi ahụ, osisi ahụ na-amịpụta ọtụtụ Ome.
Ị ma? Pulp nke mkpụrụ osisi nke ọkwa "Prince March" kemmiri, dị mfe nkewa na ọkpụkpụ ma nwee ezigbo uto. Apricots nwere uru ma na raw (ogologo site na osisi), na nke a mịrị amị ma ọ bụ nke mkpọ. Ha na-ama mma jam, jam, compote, ihe ọṅụṅụ. Ọzọkwa, a na-ejikarị mkpụrụ osisi dị iche iche eme ihe pies na ihe oriri ndị ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ilekọta agbụrụ-dị ka aprịkọt iche "Prince nke March" agaghị achọ ụdị aghụghọ ọ bụla si n'aka gị, usoro nke na-eto eto agaghị ewe ogologo oge. Osisi apricot dị ka okpokoro osisi ga-agbakwunye ịma mma na ogige nke ogige ahụ, mee ka onyinyo buru ibu ma nwee mkpụrụ obi ụtọ.